Nolol xumo ka jirta Jowhar iyo deegaano ku teedsan iyo maamulka oo dalbaday in gargaar la keeno – Radio Daljir
Nolol xumo ka jirta Jowhar iyo deegaano ku teedsan iyo maamulka oo dalbaday in gargaar la keeno
Luulyo 18, 2013 2:31 b 0
Jowhar, July 18- 2013 – Gobolka Shabeelaha dhexe ee koonfurta Soomaaliya waxaa ka soo yeeraysa cabasho xoog leh oo dhanka ah nolosha ah, xili wakhtigaan lagu jiro bisha Barakaysan ee Rammadaan.
Maamulka gobolkaas u qaabilsan dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay xaalada nolosha, waxay sheegeen in wakhtigaan ay dadka deegaanka ku jiraan xaalad adag.
Duqa degmada Jowhar ee xaruunta gobolka dhexe Cabdi Jiinow Calasow oo la hadlay war-baahinta, wuxuu sheegay in gobolka gaar ahaan magaalada Jowhar ay tahay meelaha ugu badan dalka ee ay ku nool yihiin dadka danyarta ah.
Mudane calasow wuxuu ka dalbaday dadka Soomaalida ah ee wax haysta iyo hay?adaha ka shaqeeya daryeelka nolosha bini?aadamka in ay gargaar la soo gaaraan dadka ku nool Jowhar, maadama lagu jiro bishii Rammadaan.
Qowysas fara badan oo aan awoodin in ay noloshooda maareeyaan ayaa la soo sheegayaa in ay ku nool yihiin Jowhar iyo baadiyaha ku dhow, sidoo kale waxaa jira dad kale oo ku nool gobolkaas oo iyana aan si fiican u helin nolol maalmeedkooda.
Baahin: Arbaca, 17 July 2013, Caawa Iyo Daljir Axmed Sh Maxamed Tallman ~ Daljir ~ Boosaaso